DAAWO:- Waxyaabo lagu xusuusan doono Hodan Naaleeye oo laga hirgeliyay magaaladii ay kudhalatay ee Laascaanood. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Maamulka magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool iyo Shacabka degmadaasi ayaa hergeliyay waxyaabo la doonayo in lagu xusuusto oo aan lagu ilaawin taariikhdii qurxooneyd ee ay ifka kaga tagtay marxuumad Hodan Naaleeye.
Maamulka oo kaashanaya shacabka ayaa go’aamiyay in wadada bartamaha magaalada Laascaanood loogu magac daro marxuumad Naaleeye oo iyadu waxbadan uqabatay guud ahaan shacabka somaliyeed gaar ahaan bulshada magaaladii ay ku dhalatay ee Laascaanood.
Goobta loogu magacdarayay marxuumadda waxaa kusugnaa masuuliyiin katirsan gobolka sool iyo kuwa laascaanood oo uu ugu horeeyo maayarka magaaladaasi, waxaana duco kadib adasha lagu soo bandhigay taariikhdii ay ifka kaga tagtay Hodan.
Hodan Naaleeye iyo dad kale oo soomali ah ayaa ku dhintay weerar naf halignimo ah oo kooxda Alshabaab ay todobaadkii hore ku qaadeen hotel kuyaal magaalada Kismaayo waxaana hodan weerarkaasi kula dhintay seygeed oo horay wasiir uga soo noqday maamulka Jubbaland.
Previous articleDAAWO:- MD Axmed Madoobe oo si rasmi ah loo gudoonsiiyay shahaadada musharaxnimada Jubbaland + Fariin kale oo uu diray.
Next articleDAAWO:- Maxay kawada hadleen Madaxwayne Farmaajo iyo madaxwaynihii hore ee dalka K/Africa?.